Khariidadaha Webka waxay soo nooleeyaan baska taariikhiga ah - Geofumadas
maps Web soo nooleeyo cartography taariikhiga
Luulyo, 2015 Cartografia, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps
Waxaa laga yaabaa in marnaba ku riyoon jiray maalin maalmaha ka mid arkaya map taariikhi ah, dhajinta on Google, si aan laga garan karin siday noqotay 300 sano ka hor dalka halka aan maanta taagan.
Tiknoolajiyada khariidada ee internetka ayaa u oggolaatay Oo nidarow! qaabkee
Tusaale ahaan of this waa map nostalgic ee London, halkaas oo iyagu ma ay daabacday kaliya map a of 1746, laakiin sidoo kale ku wargeliyay in raacno habka ku haboon maps cadastral muddo ka badan labaatan sano.
Waxaa hubaal ah waa shaqo lagu dayan karo, taas oo loo isticmaalay muddo maps dhexeeya 1869 iyo 1890 kuwaas oo u badan tahay in ay ahaayeen warqad, kuwaas oo la marsiiyey si taxadar leh si ay u ilaaliyaan heerka faahfaahsan wakhtigaas ahaa farshaxan.
Natiijo ahaan, waxay u badan tahay in la sameeyo waxyaabo sidan oo kale ah. Nooga yaabi sida meeq nalka magaaladu hadda yahay hal maalin ay ahaayeen beero si cad loogu qeexay sawir-qaade hore u habaysan.
Si ay u dhexgalaan shaqadan, ka dib iskaanka, waxay ku qasbanaadeen inay qabtaan shaqo iskuxiran halkaas oo qaladaadka shaqsiyadeed ee soo noqnoqda ee ku yaal xaashi kasta, isugeyn inta badan aan macquul aheyn in lagu ogaado. Waxba iskama fududaan, maadaama waqtigu sababayo in caleemaha ay xumaadaan, lagu daro wixii dhaca marka shaqadu dhex marto iskaanka.
Kadibna waxay sameysteen ururin boqolaal meelood oo la yaqaan oo ku yaal berrinka, oo ay kala soocaan mid kasta oo ka mid ah khariidadaha.
Ka shaqeynta khariidado badan oo ka mid ah aag ballaaran, oo lagu sara kiciyo hababkii hore, waxay dhalinaysaa dhibaatooyin isbedel ah, jahwareer, sida fidinta hal dhinac oo keena mid kale oo soo jiidata, xitaa xaashi isku mid ah.
Tani, waxay sameeyeen aqoonsiga axooyinka waddooyinka, si loo dhameeyo topolojiga shabakada kaas oo jeexitaan lagu samayn karo sawirka qaab kala duwan.
Sidaa awgeed, adoo isticmaalaya habka foosha, markii la kala jiidanayo, khariidada waxaa lagu dejiyey sida ugu dhow ee suurta gal ah sida haddii ay ahayd khariidad qormeysa.
Dhibaatada xiisaha leh ayaa ah dhammaan aagagga hadda loo beddelay, sida aagagga tareenka, halkaas oo aan suurtagal ahayn in la go'aamiyo dhibco la yaqaan. Tan awgeed waxay u adeegsadeen hab xoogaa adag si ay si buuxda u fahmaan, ugana soo saaraan buundooyinka ka soo baxa dariiqyada waddooyinka, iyagoo tixgelinaya baaxadda wadiiqooyinka loo adeegsado xilliyadaas. Tanna waxay ku gaareen isbeddel xitaa ka sii sax ah.
Gabagabadii, tusaale weyn oo ah waxa lagu qaban karo iyadoo la adeegsanayo awoodaha farsamo iyo tikniyoolaji ee jira. Waana wax laga xumaado kuwa u diray qolka qolka musqusha khariidadahaas oo lagu dhisay qaabab awood leh, laakiin oo aan taariikhdooda awood u yeelan karin inaan ka mahadnaqno ... hadda.
Eeg Khariidadaha London
Post Previous«Previous AutoCAD 2016. End of liisanka weligeed ah.
Post Next Injineernimada Road Technologies ee dalka Spain iyo injineeriyadda madaniga ee Shiinaha oo kaliya sanadaha 4Next »
Hal Jawaab in "Khariidadaha Websaydka dib u soo noqnoqonayaan taariikhda sawirka"
Carlos Frahm isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay in aan ogaado farsamooyinka cusub ee sawirada khariidadaha.